China Custom Kugadzira Mechina Zvikamu Kubva Pamadhinda CNC Kutendeuka Chikamu fekitori uye vagadziri | Weldo
Yakasarudzika Kugadzira Mechina Zvikamu Kubva Kubva Dhirowa CNC Kutendeuka Chikamu
CNC Turning inzira yekugadzira iyo mabhagi ezvigadzirwa anoitirwa mune chuck uye kutenderedzwa nepo chishandiso chakapihwa chidimbu kuti chibvise zvinhu kugadzira chimiro chinodiwa. Turret (inoratidzwa pakati), ine turu yekushandisa yakasungirirwa kuti iende kubhawa yezvinhu zvakasvibirira uye kubvisa zvinhu kuti igadzire mhedzisiro. Izvi zvinodaidzwawo kuti "kubvisa michina" sezvo zvichisanganisira kubvisa zvinhu. Kana iyo nzvimbo ine zvese kugadzirisa uye yekugaya kugona, senge iri pamusoro, kutenderera kunogona kumiswa kubvumira kuburitsa kubva kune mamwe maumbirwo.
Cnc yendarira kutendeuka zvikamu, cnc lathe zvikamu
Anodizing, Sandblasting, Painting, Powder unhani, ra, Silk Printing, Brushing, makorari, Laser achiita zvokutemera uye zvichingodaro.
Material Zvekushandisa kugadzira
aruminiyamu, simbi isina simbi, simbi, Brass, Bronze, Mhangura, POM, PC PP, ABS. Zvinhu zvenaironi…
Cnc kutendeuka, cnc lathe, kutendeuka
Inoshandiswa zvakanyanya muMachining, Appliance, Auto, Kuvaka, Zvigadzirwa zvemagetsi, Simba, Instrumentation, Chigadzirwa chekurapa, Telecommunication uye mamwe maindasitiri.
Furo, katoni, Mabhokisi emapuranga, kana sekuenderana nezvinodiwa nevatengi
1.Ndingawana sei kotesheni uye mhinduro yezvigadzirwa zvangu?
Ipa yako 2D madhirowa ane maratidziro (zvinhu, kurapwa kwepamusoro, kushivirira, zvimwe zvinodiwa, nezvimwewo); Ndapota zivisai yako yakawanda kushandiswa (MOQ uye zvegore kudiwa) uye logistic chinodiwa; Mifananidzo ye3D inogamuchirwa kwazvo kuzere kwechigadzirwa.
2.Ndinogona kutora yakareba sei quaotation?
Kazhinji, tinogona kupa mhinduro pakarepo uye nekupa kotesheni mumaawa makumi mana nemasere
3.Kureba sei iwe uchaburitsa zvikamu?
Kugadzirwa kwekutungamira nguva yeCCC machining ndeye 1-4wks, zvinoenderana nemusiyano zvigadzirwa uye huwandu. Isu tichazotaurirana nevatengi pane chirongwa chekugadzira uye dhivery kune yega PO.
4.What wako muripo mazwi
1) Especailly yevatengi vatsva: T / T pamberi kana 50% T / T pamberi, kuruboshwe kunoda kuve newired usati waendesa.
5.Shipment: Nemhepo kana Ocean
Kazhinji nemhepo yemasampuli (kana isina kunyanya kurema)
Ehe, NDA inodikanwa pakati pedu.
Isu tinotsigira mutemo wekudzosera mari yezvigadzirwa zvakashata, asi vatengi vanofanirwa kudzosa izvo zvakashata zvigadzirwa uye inodzora mutengo wekutumira
Pashure: Aluminium CNC inoshandura zvikamu Precision Kugaya muchina cnc zvikamu zvemuchina basa
Zvadaro: OEM yakakwirira chaiyo CNC yakashongedzwa cnc kutendeuka l zvikamu
NaLouis vanobva kuPuerto Rico - 2017.11.12 12:31
Isu tinogara tichitenda kuti ruzivo rwunosarudza mhando yechigadzirwa chekambani, mune izvi, kambani inoenderana nezvatinoda uye nhumbi dzinosangana nezvatinotarisira.
NaMartha vanobva kuPhilippines - 2017.12.09 14:01
Aluminium CNC kutendeuka zvikamu Zvakarurama Kugaya ma ...
High nemazvo Custom Made CNC machine CNC Ma ...
CNC hwokugaya hwakabvira aruminiyamu Anodize nhema zvikamu
OEM yepamusoro chaiyo CNC yakagadzirwa nemagetsi cnc kutendeuka l ...
OEM zvigadzirwa mutengesi yakanaka mhando cnc machinin ...
Tsika Yakagadzirwa CNC Machining